Ubuchwepheshe Bukhulisa Ukukhula Kwezomnotho e-Indiana | Martech Zone
Njengejaji lemiklomelo ye-Mira ka-2011, ngibe nethuba lokuchitha umhlangano wosuku nabasunguli, abasunguli, abahleli bezinhlelo nabaholi bamabhizinisi ababa nomthelela omkhulu kwezobuchwepheshe. Yize ngingenakukutshela ukuthi obani abaphumelele, uzodinga ukuya emiklomelweni kaMira ngenyanga ezayo, ngiyakutshela ukuthi kunezinto ezithile ezijabulisa kakhulu ezenzeka lapha.
Njengoba ubungalindela, izethulo eziningi bezimayelana nobuchwepheshe. Kodwa-ke, okunye okuthakazelisa kakhulu kimi lapho izinkampani ezichithe isikhathi esiningi zikhuluma ngomthelela womphakathi wokwenziwa kwawo okusha. Enye engicabanga ukuthi inamandla okuba nomthelela omuhle emphakathini webhizinisi laseCentral Indiana isicelo esakhiwe yiMIBOR. Yebo, ufunda lelo lungelo, MIBOR (iMetropolitan Indianapolis Board of Realtors).
Ngakho-ke yini eyenziwe nguMIBOR eyabanika isihlalo etafuleni lobuchwepheshe? Kuyinto isicelo sabo esisha TheStatsHouse.org. Ithuthukiswe ngokubambisana ne-Indiana Business Research Center, i-MIBOR ihlanganise i-database yokuxhumana yedatha efike ngesikhathi ezinkomba zezindlu zase-Indiana. Leli ithuluzi elinamandla lamaqembu ezentuthuko yomnotho wendawo azama ukuheha ukunakwa kwamathimba wokukhetha amasayithi futhi aqinisekise izinkampani ukuthi ukuthuthela e-Indianapolis kunengqondo.
Ukuletha idatha yokubalwa kwabantu, izindlu nezomnotho ezandleni zabantu abacabanga ukuthuthela e-Indianapolis noma umqashi ozama ukuheha abasebenzi abahle kakhulu emphakathini wethu leli thuluzi lakha indaba ebabazekayo. Idatha ejwayelekile neyomkhuba iyatholakala nge-PDF, iZwi ne-Excel esemthethweni, ukuze abasebenzisi bakwazi ukuzakhela amashadi namagrafu abo.
Ngaphezu kwedatha ejwayelekile yokubalwa kwabantu isiza sifaka ukuqhathanisa izindleko zokuphila, intela yempahla, kanye nenani ledola emadolobheni ezweni lonke. Enye yezinto engizithandayo kakhulu iphrofayli yendawo. Ngokuthayipha kukheli elithile, ungangena ekwakhekeni komphakathi endaweni engu-2, 5, 10 noma 20 mile. Iphrofayela yomsebenzi izokutshela ukuthi mangaki amabhizinisi, nokuthi yiziphi izinhlobo zamabhizinisi ezisemphakathini ozungezile.
Yize ngithanda izinhlelo zokuthuthuka kwezomnotho zethuluzi, kukhona ezinye izinhlelo zokumaketha ezithakazelisayo engingazicabanga nami.
Abokugcina be-MIira kulo nyaka bacindezela ubuchwepheshe kanye nabezindaba ezinhlakeni eziningi ezahlukahlukene. Ngiyethemba ukuthi uzobe ukhona ukuhalalisela abaphumelele ngoMeyi, futhi uzibonele ngawakho ukuthi umphakathi wethu wezobuchwepheshe ujabulisa kanjani.
Tags: ukukhula komnothoumnothoIndiana
I-Social Media Marketing Yehluleka